सम्पादकलाइ चिठि – Tannerivoice
प्रकाशित मितिः ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार
तपाईँ आज सोच्नुहुँदो हो- पत्रिका चलाएर तपाईँ देश र जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्ठान्नु हुँदो हो, नेपाली इतिहासमा तपाईँको स्थान छ, सदा रहिरहनेछ, तपाईँको देन पत्रकारिता जगतले कहिले पनि भुल्न सक्ने छैन होला। मूर्ख दाजु- बेकार हो। तपाईँको नाम अखबारले त्यहाँ छापेको छ सँधै जहाँ समाचारलाई एक कालो धर्काले तपाईँबाट सीमारेखा छुट्याएको हुन्छ।
थाहा छ तपाईँलाई, तपाईँको अखबारले रोजै कति कसिङ्गर र गुहु झ्यालबाट चोकमा मिल्काउँछ? थाहा छ तपाईँलाई……? थाहा छ तपाईँलाई…….? थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँलाई किन साँढेमाथि सम्पादकीयय लेखेँ भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँलाई किन भीमसेन थापामाथि सम्पादकीय लेखिनँ भन्ने पनि थाहा छैन, तपाईँलाई किन सम्पादकीय लेख्छु भन्ने थाहा छैन, तपाईँलाई किन सम्पादकीय लेख्दिनँ भन्ने पनि थाहा छैन।
मणि दाजु, बेकार छ। हामी सदा नै आफूलाई छोप्न खोज्छौँ। हामी अर्काको मृत्युको समाचारबाट आफ्नू मृत्युको समाचार छोप्न खोज्छौँ। हामी अर्काको विश्वास पढेर आफ्नो विश्वास छोप्न खोज्छौँ। हामी आफ्नो मनको सत्य कुरा श्रद्धाले छोप्न खोज्छौँ। म जो ईश्वरको कल्पना गर्छु, त्यसको पूजा गर्छु, म आफ्नू औँलामा लागेको बोकाको रगतको रङलाई अबिरले छोप्न खोज्छु। तपाईँ जो साँढेमाथि सम्पादकीय लेख्नुहुन्छ, आफू गाई भएको छोप्न खोज्नुहुन्छ। मणिराज उपाध्यायलाई सम्पादक मणिराज उपाध्यायले छोपिरहेछ।
शङ्कर लामिछानेलाई पति, पिता, व्यापारी शङ्कर लामिछानेले छोपिरहेछ। तपाईँ आत्महत्या गर्दै हुनुहुन्छ, म आत्महत्या गर्दै छु। तपाईँ र म नमरीकन के खबरलायक हुँदैनौँ? हाम्रो आत्महत्याको प्रोसेस के यति महत्वहीन छ हामी स्वयं त्यसबारे सोच्न लेख्न पनि चाहन्नौँ? यो सोचाइलाई छोप्नु नै हाम्रो जीवन हो त ?
०२४ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति ‘एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याजमा समावेश शंकर लामिछानेले तत्कालिन समाज दैनिकका सम्पादक मणिराज उपाध्यायलाई लेखिएको चिठि
बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले खोप लगाईसकेपछि प्रमाणिकरण कहाँ गर्ने ?